IWEGHACHITE DATA NA ỌKACHAMARA ỌKACHAMARA DATA RECOVERY - ESI MEE - 2019
Iweghachite data na Ọkachamara Ọkachamara Data Recovery
Data echekwara na kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ, na-enwekarị uru dị elu maka onye ọrụ karịa ngwaọrụ n'onwe ya. Nke a abụghị ihe mgbagwoju anya, n'ihi na ụgbọala na-agbagha, n'agbanyeghị ego ole ọ na-efu, nwere ike dochie anya mgbe niile, mana ihe ọmụma dị na ya enweghị ike ịghaghachi mgbe niile. N'ụzọ dị mma, e nwere ezigbo ngwá ọrụ pụrụ iche maka mgbake data, onye ọ bụla n'ime ha nwekwara uru na ọghọm ya.
Na-enweta ozi efu
Dị ka anyị kwurula, e nwere usoro ihe omume ole na ole a pụrụ iji mee ihe iji weghachite data na-efu ma ọ bụ furu efu. Algorithm nke ime ihe na ojiji nke otutu n'ime ha abughi ihe di iche, ya mere n'isiokwu a, anyi ga-eche nani otu ngwangwa ngwanrọ - Onye nyocha Data Recovery.
Otú ọ dị, a na-akwụ ụgwọ software a, iji rụọ ọrụ na ntakịrị ihe ọmụma ga-ezu nke nsụgharị ya n'efu. Enwere ike ị nweta data n'onwe ya ma n'ime ime ụlọ (nke siri ike na nke siri ike) na mpụga (draịva flash, kaadị ebe nchekwa, wdg). Ya mere, ka anyi bido.
Mbụ ị chọrọ ibudata ngwa ahụ na ajụjụ na kọmputa gị ma wụnye ya. A na-eme nke a n'ụzọ dị nnọọ mfe, ma e nwere ọtụtụ nuances dị ịrịba ama.
Weghachite Wizard Data Recovery Wizard na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị.
Soro njikọ n'elu iji malite ibudata ngwa ahụ. Pịa bọtịnụ ahụ "Free Download" iji budata nsụgharị free ma dee na windo nke meghere "Explorer" nchekwa maka faịlụ nwere ike ime. Pịa bọtịnụ ahụ "Chekwa".
Chere ruo mgbe nbudata ahụ zuru oke, wee malite nchịkọta ihe nbudata onye ọkachamara nchịkwa data weghachite.
Họrọ asụsụ ị họọrọ - "Russian" - ma pịa "OK".
Na windo nnabata ọkachamara, pịa "Na-esote".
Nabata usoro nke nkwekọrịta nkwekọrịta site na ịpị bọtịnụ kwesịrị ekwesị na windo ọzọ.
Họrọ ụzọ iji wụnye ihe omume ahụ ma ọ bụ hapụ uru bara uru, wee pịa "Kwenye".
Rịba ama: Ọkachamara Iweghachite Data EaseUS, yana software ọ bụla, adịghị atụ aro ka a rụnye ya na diski ahụ, data nke ị na-eme atụmatụ ịtụghachite n'ọdịnihu.
Na-esote, dee igbe nlele iji mepụta ụzọ dị mkpirikpi "Desktọpụ" na na nhazi ngwa ngwa ma ọ bụ wepu ha ma ọ bụrụ na nhọrọ ndị a anaghị amasị gị. Pịa "Wụnye".
Chere ruo mgbe ngwụcha nke usoro ihe omume a, enwere ike ịhụ ọganihu na pasent pasent.
Mgbe e mechara nwụnye, ọ bụrụ na ịchọtaghị windo ikpeazụ ahụ, a ga-ebido Wizard Data Recovery Wizard ozugbo ịpị bọtịnụ ahụ "Zuru ezu".
A na-atụle ihe ndị bụ isi nke Ọkachamara Iweghachite Data EaseUS na isiokwu dị iche, nke a pụrụ ịchọta na njikọ a. Na nkenke, iji usoro ihe omume ahụ, ị ​​nwere ike iweghachite ụdị faịlụ ọ bụla na ọnọdụ ndị a:
Nhichapụ mberede site "Nkata" ma ọ bụ na-agafe ya;
Mmebi na ngwaọrụ nchekwa;
Ihichapụ otu disk disk;
Njehie na ọdịda na os;
Enweghị usoro faịlụ.
Ọ dị mkpa: Mmetụta na irè nke usoro mgbake ahụ na-adabere n'ogologo oge e wepụrụ data na diski na ugboro ole ka edere ozi ọhụrụ mgbe nke ahụ gasịrị. Ihe yiri nke a, ọ bụghị ọrụ dị oke mkpa na-arụ site n'ókè nke nbibi nke ụgbọala ahụ.
Mgbe anyị tụlechara echiche dị mkpa, anyị na-aga n'ihu na-eme ihe ka mkpa. Na windo windo nke Wizard Data Recovery na EaseUS, akụkụ niile nke diski arụnyere n'ime kọmputa na ngwa mpụga ejikọrọ na ya, ma ọ bụrụ na ọ bụla, na-egosipụta.
Dabere na ebe ịchọrọ iweghachite data, dịka ọmụmaatụ, site na nke diski diski ma ọ bụ ngwa USB USB ntanetị, họrọ ụgbọala kwesịrị ekwesị na windo.
Tụkwasị na nke a, ị nwere ike ịhọrọ otu nchekwa iji chọpụta faịlụ ehichapụ. Ọ bụrụ na ị maara ebe kpọmkwem nke data efu - nke a ga-abụ nhọrọ kachasị mma.
Mgbe ị na-ahọrọ otu mbanye / nkebi / nchekwa iji chọọ maka faịlụ ehichapụ, pịa bọtịnụ. "Iṅomi"emi odude ke ekpri n̄kan̄ ke n̄kan̄ ukpepn̄wed emi.
Usoro ọchụchọ ga-amalite, oge nke dabere na nha ndekọ ndekọ ahụ na ọnụ ọgụgụ faịlụ ndị ọ nwere.
Ọganihu nyocha na oge ruo mgbe agwụcha ga-egosiputa na mpaghara ebe nchekwa nke nchekwa ahụ a na-arụ n'ime Ọkachamara Iweghachite Data EaseUS.
Kpọmkwem na usoro nyocha, ị nwere ike ịhụ nchekwa na faịlụ ndị a na-agbado site na ụdị na usoro, dị ka aha ha gosipụtara.
Enwere ike ịmepe folda ọ bụla site na ịpị abụọ ma na-elele ọdịnaya ya. Iji laghachi na nchịkọta nhọrọ, nanị họrọ ihe ndekọ mgbọrọgwụ na window window.
Mgbe ichere maka usoro nkwenye iji mezue, chọta na ndepụta nke ederede aha nke nwere ehichapụ mbụ ma ọ bụ data furu efu - ihe niile ị chọrọ bụ ịma ụdị ha (usoro). Ya mere, ihe oyiyi nkịtị ga-adị na folda nke aha ya nwere okwu ahụ "JPEG", ihe ngosi - "Gif"Akwụkwọ ederede ederede - "Faịlụ Microsoft DOCX" na ihe ndị ọzọ.
Gosi ihe ndekọ a chọrọ site na ịlele igbe na-esote aha ya, ma ọ bụ gaa na ya ma họrọ faịlụ kpọmkwem n'otu ụzọ ahụ. Mgbe ị mere nhọrọ, pịa "Weghachite".
Rịba ama: Tinyere ihe ndị ọzọ, ịnwere ike ịgbanwe n'etiti ndekọ aha site na iji ihe nchọgharị ahụ. Na nchekwa nchekwa, ị nwere ike idozi ọdịnaya ha site na aha, olu, ụbọchị, ụdị, na ọnọdụ.
Na window window nke na-egosi "Explorer" họrọ nchekwa iji chekwaa faịlụ ndị a gbaghachite wee pịa "OK".
Ọ dị mkpa: Echekwala faịlụ ndị a na-achọpụta na ụgbọala nke ha na-agabu. Ọ ka mma iji iji ngwaọrụ ọzọ disk ma ọ bụ USB flash mbanye.
Mgbe oge ụfọdụ (dabere na ọnụ ọgụgụ nke faịlụ ahọpụtara na nha ha), a ga-eweghachi data ahụ.
The nchekwa nke ị kpebiri ịzọpụta ha na nzọụkwụ mbụ ga-akpaghị aka na-emeghe.
Rịba ama: Usoro mmemme ahụ ọ bụghị naanị faịlụ ndị ahụ n'onwe ha, kamakwa ụzọ ha na-esetịbu - a na-akpọghachi ya dịka nchịkọta akwụkwọ n'ime ndekọ ahụ ahọpụtara maka ichekwa.
Mgbe nchịkọta data ezuchara, ị nwere ike ịnọgide na-arụ ọrụ na Ọkachamara Iweghachite Data EaseUS site na ịlaghachi na ihuenyo ya site na ịpị bọtịnụ ahụ "Ụlọ".
Ọ bụrụ na ịchọrọ, ị nwere ike ịchekwa oge ikpeazụ.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ọ dịghị ihe siri ike n 'iweghachite faịlụ ma ọ bụ furu efu, n'agbanyeghị ụdị usoro ha nwere ma ọ bụ nke a na-echekwa ụgbọala ha. Nchịkọta Ọkachamara Iweghachite Data EaseUS elelere na ihe a bụ ọrụ ahụ nke ọma. Enweghi ike ịbụ naanị ikpe ndị ahụ ebe diski ma ọ bụ flash drive na data ndị e wepụrụ na mbụ emebiri emebi ma ọ bụ kọọrọ ha ozi ọhụrụ ugboro ugboro, ma na nke a, ihe ọ bụla dị otú ahụ ga-enweghị ike. Echere na isiokwu a enyerela gị aka ma nyere aka weghachite data dị mkpa.